राती क्वारेन्टाइनमा, दिउँसो काफल खान जंगलमा : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै राती क्वारेन्टाइनमा, दिउँसो काफल खान जंगलमा
बैतडी । अहिले बैतडी जिल्लामा ५ हजार बढि ब्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाछ न् । उनिहरु मध्ये धेरै ब्यक्ति इमान्दार भएपनि केहिलाई सम्हाल्न भने निकै गा¥हो छ । गएको बिहिबार पाटन ६ की एक महिला झाक्रीँ हुँ भन्दै क्वारेन्टाइनबाटै काम्दै गाउँ घुमिन्, ‘म सबैलाई बचाउछँु भन्दै दैडिन्’, उनलाई नियन्त्रणमा लिई पुनः क्वारेन्टाइनमा राखियो । यो कुरालाई जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा लिई यस्ता गतिबिधि गर्नेलाई घर भन्दा टाढाको क्वारेन्टाइनमा सरुवा गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सिद्धराज भट्टले बताए ।
बिभिन्न ठाउँका क्वारेटाइनमा बसेकाहरु दिनमा काफल खान जंगल जाने गरेको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोसी बताउछन् । ‘दिनभर घरपरिवार संग बसेर काम गर्ने अनि साझपख परिवार सहित क्वारेन्टाइनमा बस्न जाने गुनासो आइरहेको छ ।’ प्रजिअ जोशीले भने । जुवातास खेल्ने जस्ता गतिबिधिहरु क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुबाट भैरहेको समेत गुनासो आएको उनले बताए । ‘जबसम्म क्वारेन्टाइनको महत्व सबैले बुझ्दैनन्, लकडाउन केहो? कस्का लागी किन गरिएको हो ? यो कुरा बुझ्दैनन् तब सम्म समस्याहरु आउछ’ जोशीको भनाई थियो ।
क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये कतिपयले सारेकारवालाहरुको कुरा नसुन्ने गरेको दशरथचन्द नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिक्रमबहादुर चन्द बताउछन् । ‘बिदेशबाट आएका दाजुभाइहरुलाई कोरोना भाइरसको त्रास महसुस नभएको देखिन्छ । धेरै ब्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा जुवातास खेलेर दिन बिताइरहेका छन् । सामाजिक दुरीको कुनै मतलब गरिएको छैन्, यसबारे जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।’ उनले भने ।’ कतिपय ठाउँमा वडाअध्यक्षको पाट्रि भन्दा बिपक्षका ब्यक्तिले उक्साइदिने गरेको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मिना चन्दले बताइन् । अर्को क्वारेन्टाइनमा भत्ता बाढ्दैछन्, राम्रो खानेकुरा दिएका छन्, मासुभात खुवाएका छन् भनेर उक्साउने गरेको उनले बताइन् ।
बैतडी जिल्लालाई रेडजोनमा राखि सर्तकता अपनाइए पनि स्थानियबासिको लापरबाहिका कारण कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखीम रहेको पत्रकार बसन्त बिष्टले बताए ।
राजधानी समाचारदाता काठमाडौं यतिबेला गायक प्रकाश सपुत खुसी छन् । आफ्नो नयाँ गीतले दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि उनी खुसी छन् । निषेधाज्ञामा धेरै संगीतकर्मी...
मुम्बई इन्डियन्सको सजिलो जीत
Not-to-be-missed Kumar Raut - October 2, 2020 0
युएइ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा मुम्बइ इन्डियन्स विजयी भयो । उसले पञ्जावलाई ४८ रनले पराजित गरेको हो ।...
प्रदेश ५ काे निती : कोरोना कहरबाट उठ्न कृषिलाई प्राथामिकता
बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभा पेश...
स्टारबिना मनाङको रवाफ
खेल Kumar Raut - December 19, 2019 0
काठमाडौं । फरवार्ड विमल रानाको २ गोल सहयोगमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लबले राजधानीमा जारी नयाँ सिजनको कतार एयरवेज शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा विजयी...
तस्करको निसाना सरकारी वन
Editor-Picks Kumar Raut - April 20, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय र साझेदारी वनमा लकडाउनको मौका पारेर काठ तथा वन्यजन्तुको तस्करी बढेको पाइएको छ । समुदायले व्यवस्थापन गरेका...
राजनीति Dhruba Lamsal - October 3, 2020 0
कला Kumar Raut - March 8, 2021 0
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - September 24, 2020 0
कक्षा २, उमेर ५७ वर्ष
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - March 8, 2020 0
दैलेख । उमेरले ५७ वर्ष पार गरेका जयबहादुर सुनार नाती पुस्तासंगै स्कुल धाउन थालेको दुई वर्ष भयो । नारायण नगरपालिका २ जाहरकोट भैरवटोलस्थित खड्ग...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - April 11, 2021 0
विजय नेपाल - June 11, 2021